Crypto ara-barotra App Robinhood nandefa in Colorado - Blockchain News
Aprily 22, 2018 Admin
Ny fifaninanana ho an'ny cryptocurrency tontolon'ny fifanakalozana dia nandroso tamin'ny Etazonia. Startup fifanakalozana Robinhood nanambara tao amin'ny Twitter fotsiny ny fanitarana ho any Colorado. Ny sehatra ara-barotra dia tsy misarom-boaly commision-barotra maimaim-poana ho an'ny Bitcoin tao Colorado.
Ankoatra ny cryptocurrencies, ny Palo Alto, Calif.-monina ihany koa ny sehatra ara-barotra manohana boloky hazo, ETFs sy ny safidy.
Colorado, izay fantatra amin'ny Rocky Mountain tampon'isa sy blockchain-namana lalàna, mpikamban'ny fanjakana vitsivitsy izay dia mivelatra ny California, Massachusetts, Missouri sy Montana, Robinhood rehetra izay nanampy tamin'ny fiandohan'ny volana Aprily ho anisan'ny 'ny toetry-by-panjakana rollout izay mihetsiketsika miaraka.
Iza moa John Hyman, na inona no fantatsika momba ny fampiasam-bola telegrama mpanolotsaina
hafatra misy mari-pamantarana ...
Mirotsaka amin'ny sisiny Tra ...
Previous Post:Bitcoin ATM Network Coinsource miasa amin'ny lafin-javatra maro-authenticator Acuant
Next Post:Iran fomba ofisialy mandràra fampiasana cryptocurrencies
Mey 18, 2018 amin'ny 2:37 AM
Jona 3, 2018 amin'ny 3:06 AM